Ha Factory celi iPhone aan Oge ah Top 4 Siyaabaha
Waxaa dhici kartaa in mid ka mid ah oo naga mid ah. Xitaa ugu fiican oo naga mid ah waxay u baahan yihiin qaar ka mid ah waqti uu ku nasto iyo in aad neefsato. Sidaas oo kale ayey telefoonka. Marka iPhone kaliya Xayiraadda joojinayso shaqada, aad u hagaajin kartaa adigoo iyo ma u baahan tahay in ay sii wadaan ka baxsan si ay adeeg degdeg ah. Keddibna Warshadu waa mid xal u weyn oo loo isticmaali karo in ay dib u soo qaado iPhone hawlaha kaamil ah. Iyada oo wershedda dib aad ku laabato oo aad iPhone in xaaladda "cusub", sababtoo ah wax kasta oo la tirtirayaa, tusaale ahaan muusikada, sawiro, barnaamijyadooda iyo xog kale oo lagu daray ee la soo dhaafay. IPhone ayaa sidoo kale soo laaban goobaha ay asalka ah. All oo dhan, keddibna warshad macnaheedu waa inaad u gebi ahaanba tirtiro xogta aad ka telefoonka oo laga bilaabo sidii mid cusub.
Waxaa jira 4 siyaabood oo aad ku warshad damiyo iPhone:
Xalka 1. Factory celi iPhone si toos ah iPhone
Xalka 2. Dib u celi iPhone in Settings Factory via Lugood
Xalka 3. Dib u celi iPhone in Factory la Raadi My iPhone on iCloud (haddii aad iPhone lumo)
Xalka 4. Isku day Software in celi iPhone in Factory Gebi (habka ugu nabad badan)
Fiiro gaar ah: 1) .Hadii aad ku socoto in ay sii wadaan in ay isticmaalaan iPhone this, waa OK in la isku dayo xal 1 iyo Xalka 2. Haddii aad ku socoto inay iska iibiso, ku deeqdo ama siiso iPhone iska, aad xoog leh lagula taliyey in la isticmaalo Solution 3, sababta oo ah xalka kaliya 3 ka heli doontaa dhammaan macluumaadka aad si buuxda u tirtirayaa, iyada oo aan wax fursad ah inuu ka soo kabsado xogta ka iPhone, xitaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka ma sameyn karaan. Waa mid aad u halis ah in uu ka tago xogta shakhsiga ku saabsan iPhone haddii aad ku socoto inay iska iibiso ama u bixin.
2) .Inta damiyo iPhone in warshad, aad u malaynayeen in ay gurmad aad iPhone:
* xogta Nuqul ka jir iPhone in phone cusub: Isku day in aad nuqulka Wondershare MobileTrans xiriirada, fariimaha qoraalka ah, sawiro, music, videos ka hore iPhone in aad phone cusub.
* xogta iPhone kaabta in Lugood ama xogta iPhone gurmad si iCloud. Later waxaad ka heli kartaa qalab iPhone ah, sida Wondershare Dr.Fone ee macruufka, Macdan files ka gurmad ah mar kasta oo aad dib u baahan tahay in aad xiriirada, sawiro, ama fariimaha qoraalka ah.
Tallaabada 1. Samee gurmad ah xogta haddii aad rabtid in aad sii hayn aad music, barnaamijyadooda ama sawiro.
Tallaabada 2. Ka dib markii ay gurmad ah, tag Settings app iyo hoos u Guud menu oo ka jaftaa. Qeybta hoose ee aad leedahay Warbixannada menu. Waxaa Tubada.
Tallaabada 3. telefoonka ayaa kuu soo bandhigi doonaa taxane ah oo fursadaha dib warshad. Dooro ikhtiyaarka ugu fiican adiga iyo waxa ka jaftaa. IPhone Warshadda ahaaneysa xogta aad doorato.
Tallaabada 4. telefoonka ayaa idiin digi doonaa in aad tirtiro xogta oo dhan. Waxaa lagu siin doonaa doorasho ee Waxaad Cancel ama masixi iPhone .
Waxay qaadataa qiyaastii hal ilaa laba daqiiqo ka hor aad leedahay brand cusub iPhone la lahayn xogta waxa si weligood.
Fursada kale waa in aad isticmaasho Lugood in la soo celiyo aad iPhone. Natiijadan ayaa waxa ay la mid ah, dhammaan xogta aad laga tirtirayaa oo aad telefoon u noqon doonaa sida cusub. Ka hor inta aadan warshad dib kartaa iPhone, waxaad hubisaa in aad update ugu dambeeyay ee Lugood iyo aad leedahay raad raac xogta aad.
Tallaabada 1. Isku telefoonka in kombiyuutarka la cable ku lifaaqan oo sug daqiiqad ah.
Tallaabada 2. Dooro iPhone marka ay u muuqato on Lugood.
Tallaabada 3. Guji ee Soo Celinta iPhone button mar kale oo ay xaqiijinayaan dib warshadda.
Tallaabada 4. Just sugto ilaa aad iPhone la soo celiyo. Tani waxay qaadan kartaa ilaa dhowr daqiiqo.
Haddii aad badiyay aad iPhone, aad awoodaan in ay isticmaalaan Raadi My iPhone in iCloud si dib u iPhone in warshad, iska ilaalinta qofka aad u hesho iPhone si ay u helaan warbixinta qofka. Laakiin marka hore, waa in aad u hubiso in aad karti Raadi My iPhone aad iPhone (Settings> iCloud> Hel My iPhone).
Tallaabada 1. Open iCloud.com la browser web on your computer ah. Log in la ID Apple aad.
Tallaabada 2.Click Raadi My iPhone > furmo cusub, hogaanka, guji Devices oo dhan . In liiska hoos-hoos u, xulo iPhone.
Tallaabada 3. Ka dib xulashada aad iPhone, waxaad ka arki kartaa 3 fursadaha kaliya hoos ku qoran: Play Sound , Lost Mode , ama Eraser iPhone . Riix masixi iPhone in ay qarka u saaran inay goobaha warshad.
Xitaa ka dib markii warshad resetting aad iPhone la Lugood ama iCloud, qaar ka mid ah macluumaadka ku saabsan iPhone weli ka jiraan, laakiin aan la arki karin. Iyadoo qaar ka mid ah software soo kabashada, sida Wondershare Dr.Fone ee macruufka , xogta ku saabsan iPhone si fudud loo soo kabsaday doonaa. Waa wax aad u xun, waayo, dadka kale si ay u helaan xogta aad, sax? Ha u ogolaan waa ay dhici. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay isku dayaan SafeEraser Wondershare si dib u iPhone in goobaha Factory. Ka dib waxaa la isticmaalayo, software ma soo kaban karto xogta aad ka iPhone.
Tallaabada 1 Download Wondershare SafeEraser
Riix badhanka Download hoos ku qoran si aad u hesho version tijaabo ah Wondershare SafeEraser ah. Ku rakib oo aan bilowno on your computer. Markaas xiriiriyaan iPhone la your computer via cable USB ah. Ka dib markaas, aad iPhone si toos ah ogaan doonaa.
Tallaabada 2 Dooro nooca tirtiro xogta iyo heerka
On uu furmo suuqa ugu weyn, dooran masixi dhammaan xogta ku saabsan qalab . In uu furmo suuqa cusub, markii 3 nooc oo ah heerka ugu bixiyeen, dooran dhexe . Waa heerka lagu faray. Waxa kale oo aad dooran kartaa Low iyo Sare . Guji Start .
Tallaabada 3 Dib u celi aad iPhone in goobaha Factory
Ka dib markii gujinaya Start, waxaad ka arki kartaa barnaamijkan uu bilaabo inuu shaqeeyo. Waxaa ka saaraysaa oo dhan photos, fariimaha qoraalka ah, wac taariikhda, abuse wac, xiriirada, barnaamijyadooda, songs, videos, ID Apple, goobaha, wallpaper, iwm iyo in ka badan ka iPhone. Marka uu dhamaado, iPhone cusub jiro.
Gebi qaab iPhone Video Tutorial
Dabcan tani waa wax aad maalin walba ma samayn. Tani waa waxa aad qaban marka ay timaado xaalado gaar ah. Tusaale ahaan haddii aad iibiso aad iPhone aad hubaal waa warshad damiyo telefoonka si user cusub ma yeelan doonaan in ay helaan xogta aad. Marka aad ku rakibtay barnaamijyadooda aad u badan ayaa ah in uu safo iPhone, keddibna arrin waa muhiim inaad nadiifiso telefoonka. Haddii aad iPhone fariisiyo, in laga yaabo in dib warshad waa doorasho kaliya ee aad leedahay si aad u hesho telefoonka mar kale ka shaqeeya. Oo haddana ma u baahan tahay in aad u qaadato adeegga. Mararka qaarkood telefoonka ayaa kuu sheegi doona laftiisa ka, in la gaaro waqtiga dib u. Marka la idinkaga tegey fariimaha aan caadi ahayn, sida "Hawlgalkani waxa laga yaabaa in aan la dhameystiray." tani waa markii ugu for dib warshad, sababtoo ah telefoonka waxaa ka badatay. Dunida ugu saxsan ee mobiilka iPhone ama dib warshadda si joogto ah loo sameeyey lahaa, maxaa yeelay, aad rabto in aad telefoon si fiican u shaqeeyo oo waxaad noqotaan sida cusub.
Halkee iyo Sidee loo iibi Old iPhone qiimo wanaagsan
Top Siyaabaha kaabta aad iPhone Ka hor inta jailbreak macruufka 7
> Resource > iPhone > Top 4 Siyaabaha Factory celi iPhone